फेरी नौटंकी ,के भएको यस्तो ? – नेपाल डायरी डट कम
मे 29, 2009 मे 29, 2009 by nepaldiary
फेरी नौटंकी ,के भएको यस्तो ?
नेपाली काङ्रेस भित्र सरकार मा जाने कि नजाने भन्ने बिशयमा तिब्र मतभेद भएको बाहिर आएको छ । केही केन्द्रीय नेता हरु सरकार मा जानु पर्ने तर्क गरी रहेका छ्न भने अर्को तर्फ केही नेताहरु सरकार बाहिर बसेर एमाले नेत्रित्व को सरकार लाई सहयोग गर्नु पर्ने तर्क गरी रहेका छन ।
मदेसी जन अधिकार फोरम का उपेन्द्र यादव वा बिजय गच्छदार कस्को नेत्रित्वमा सरकार मा जाने भन्ने बिषयमा चर्को मतभेद जारी छ । उपेन्द्र यादव ले मेदेश आन्दोलन मा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका भएको ले आफ्नै नेत्रित्वमा सरकारमा जाने प्राधान मन्त्री लाई जानकारी गराएका छन भने बिजय गच्छदार आफु संसदिय दल को नेता भएको ले आफ्नै नेत्रित्वमा सरकार मा जाने दाबी गरिरहेका छन ।
कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि खनाल र ओली पक्ष का समर्थक लाई सरकारमा पठाएको भन्दै एमाले मा आन्तरिक बिबाद चुलीएको छ ।
आज का पत्रपत्रिका, रेडियो,टेलेभिजन का प्रमुख समाचार बिचार हुन माथिका हरफहरु ।
नेपाली राजनीतिमा पुन नौटंकी सुरु भएको छ,सत्ता राजनितिको घिनलाग्दो खेलमा लागेर कुर्सी,सत्ता स्वार्थ का लागि नेताहरु मरिमेट्दैछन । भाषणमा उधारो क्रान्तिकारी सपना देखाउन माहिर नेताहरु व्यबहारमा भने सत्ताका लागि लुछाचुडी गर्दै छ्न । शान्ती,बिकास,स्थिरता,संबिधान लेखन अब नेपालका नेता, पार्टिहरुको पहिलो प्राथमिकता त रहेन,बरु को मन्त्री बन्ने,को कुर्शिमा पुग्ने भन्ने खेल धमाधम जारी छ । संबिधान सभाको निर्वाचन,जन-आन्दोलन का बेला गरेका बाचाहरु भुलेर जनताको जन जीवन सँग प्रतक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा प्राथमिकता मा नपरे पछी सर्बसाधारण जनताले के बुझ्लान ? देशका दुर दराजमा के सन्देश गहिरहेको छ ? जनताले के सोचेका होलान्? के हाम्रा नेता हरु यो तथ्य सँग अनबिग्यँ होलान ?
पत्रपत्रिका पढे त्यही लेखेको छ, पढ्न जान्ने केही नेपाली गाउँ घरमा पत्रपत्रिका पढेर के बुझ्छन-स्पस्ट छ,नेताहरु कुर्सिका लागि तानातान गरी रहेका छन, सरकार बनाउने बिषयमा दल्हरु बिच बिबाद छ। कोइराला सुजातालाई मन्त्री बनाउने दाउमा छन वा उपन्द्र यादव र बिजय गच्छदार पक्ष बिच झडप भयो । यस्तो समाचार पढेर सर्बसाधारण मा कस्तो सन्देश जाला ?
एफ एम रेडियो को कारण ले धेरै नेपाली पढ्न,लेख्ने नजाने पनि समाचार/ बिचार सुन्ने र जान्ने भएका छन । जुम्लाको काले दमाइ होस वा ताप्लेजुङ् को फुर्वा नोर्बु वा काठमाडौं कै आसाकाजी पासा होस अथवा रौतहट को मोहम्मद आलम , समाचार सुनेर उनिहरु ले के थाहा पाउछन ? निस्चयनै उसले थाहा पाउने बिषय हो सरकार मा कसलाई पठाउने भन्नेमा झलनाथ खनाल र खड्ग ओली बिच बिबाद वा कटवाल ले सरकार को निर्णय नमान्दा सरकार ढल्यो अथवा भारत ले जे भन्यो नेपाली राजनीतिमा त्यै हुन्छ् । किन भने रेडियो रिपोर्ट होस वा पत्रपत्रिकामा छापिने बिस्लेषण यही सेरोफेरो मा केन्द्रित छन ।
आम् जनता देसमा के हुँदै छ वा अब देश कता जाला भन्ने धारणा बनाउदा सामान्यतया यही समाचार,बिचार पढेर वा सुनेर बनाउछ्न । उनिहरु आफु राजनीतिक बिष्लेशण गर्ने नजाने पनि सुनेर,पढेर राजनीतिका लक्षण, संकेत चाल पाउछ्न
। तर बिडम्बना पत्र-पत्रीका का लागि होस वा रेडियो रिपोर्ट , राम्रो समाचार लेख्ने बिषय दुर्लभ छन । संबिधान छ महिना भित्र बनी सक्ने, सरकारले जुम्ला-हिल्सा सडक तीन महिना भित्र तयार गर्ने, लोडसेडिङ अन्त्य हुने, वाइसियल काठमाडौं को फोहोर उठाउदै, युथ फोर्स ले मेलम्ची आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने जस्ता समाचार लेख्नु पर्ने बेलामा -नेताहरु कुर्सिका लागि लड्दै, प्रचन्ड ले माधव कुमार लाई बिषब्रिक्ष भने वा खड्ग ओली ले माओवादी अपराधी हरुको समुह हो भने जस्ता समाचार लेख्न वाध्य छन संचार माध्यम
के हाम्रा, नेता, मन्त्री, दल, सभासद सबै पाखण्डी, पदलोलुप, घुस्याहा र निर्लज्जै भएको हुन त ? किन सहमति बनाएर शान्ती प्रकृया,संबिधान लेखन र स्थिरता, बिकास का लागि हाम्रा नेताहरु लगनी गर्ने सक्दैनन ।
कम्तिमा ठुला दलहरु मिलेर बिद्यामान संकट हटाउन पहल गर्ने हो भने जारी समस्या,अबरोध अबस्य हटेर जानेछ, अन्यथा जनता राज्य, दल र नेताको लाचरिपन र अकर्मन्यता सधैं सहेर बस्नुपर्छ वा हाम्रै भाग्य खोटो भनेर चित्त बुझाएर बस्ने वाला छैन , जनाताको सक्ती अजेय छ भन्ने त हाम्रा राजनेता हरुलाई ज्ञातै होला । नभए पनि गणतन्त्र दिवस ले यती चेत खुलाओव, सबैलाई शुभकामना ।
Posted in नागरीक,नेपाल डायरीTagged एमाले,काङ्रेस,गणतन्त्र,प्रजातन्त्र,फोरम
अघिल्लो गणतन्त्र दिवस को शुभकामना !
अर्को टायर चै नबाली बन्द गरौ न है ! त्यसो गरे कसो होला ?